Nezvedu - CHUANGRONG
CHUANGRONG aiva nemafekitari mashanu
CHUANGRONGiindasitiri yekugovana uye yekutengesa yakabatanidzwa kambani, yakavambwa muna 2005 iyo yakatarisana nekugadzirwa kweHDPE Pipes, Fittings & Valves, PPR Pipes, Fittings & Valves, PP compression fittings & Valves, uye kutengeswa kwePlastic Pipe Welding machines, Pipe Tools, Pipe Repair Clamp.zvichingoenda zvakadaro.
CHUANGRONG'schinangwa chiri kupa vatengi vakasiyana-siyana mhinduro yakakwana yepurasitiki pombi system.Inogona kupa yakanyatsogadzirwa, yakagadziridzwa sevhisi yepurojekiti yako.
CHUANGRONGnguva dzose inopa zvigadzirwa zvakanakisisa uye mutengo kune vatengi.Inopa vatengi purofiti yakanaka yekuvandudza bhizinesi ravo nekunyanya kuvimba.Kana iwe uchifarira kambani yedu uye zvigadzirwa, ndapota usazeza kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Tekinoroji inovandudza hupenyu
CHUANGRONG nemakambani ayo akabatana anoshanda muR&D, kugadzira, kutengesa uye kuisirwa mapombi epurasitiki matsva nemafittings.Yaive nemafekitori mashanu, imwe yevagadziri vakakura uye mutengesi wepombi dzepurasitiki uye mafittings muChina.Uyezve, kambani ine mamwe 100 seti pombi kugadzirwa mitsetse kuti mberi panguva dzomukati uye kunze, 200 seti akakodzera kugadzirwa midziyo.Kukwanisa kugadzirwa kunosvika kupfuura 100 zviuru matani.Yayo hombe ine 6 masisitimu emvura, gasi, dredging, migodhi, kudiridza uye magetsi, anopfuura makumi maviri akateedzana uye anopfuura 7000 yakatarwa.
CHUANGRONG ine nzira dzekuona dzakakwana dzine marudzi ese emidziyo yemhando yepamusoro kuti ive nechokwadi chekutonga kwemhando mumatanho ese kubva kune yakabikwa kusvika kune yapera chigadzirwa.Zvigadzirwa zvinoenderana ne ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130 standard, uye yakatenderwa ne ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.
Chikwata cheCHANGRONG TRADING
CHUANGRONG ine timu yakanakisa yevashandi ine ruzivo rwakapfuma.Mukuru wayo ndeye Kuvimbika, Nyanzvi uye Kushanda.Yakagadzira hukama hwebhizinesi nenyika dzinopfuura makumi matanhatu uye nzvimbo mune indasitiri yehukama.Zvakadai seUnited States, Chile, Guyana, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Mongolia, Russia, Africa uye zvichingodaro.